छोरालाई फेसबुकमा लाइक र दक्षिणा कम आउँछ : विलसन विक्रम राई
नेपाल लाइभ आइतबार, असोज १९, २०७६, १०:३६
हास्य कलाकार विलसन विक्रम राई 'तम्के बुढा'को नामले दर्शकमाझ लोकप्रिय छन्। पछल्लो समय व्यस्त कलाकार मध्येमा पर्छन् उनी। दसैंको बेलामाा पनि विभिन्न कन्सर्ट तथा कार्यक्रममा उनी व्यस्त हुन्छन्। उनीसँग रहेर नेपाल लाइभका अनिल यादवले गरेको कुराकानी:
दसैं कसरी र कहाँ मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ?
घुम्दै मनाउने सुरमा छु। अलिकति झापा, अलिकति काठमाडौं, अलिकति अस्ट्रेलियातिर कार्यक्रम छ।
दसैंको सबैभन्दा मनपर्ने/मननपर्ने पक्ष के हुन्?
दसैंको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने भनेको सबै आफन्त भेट हुन्छन्। दक्षिणा पाइन्छ। मन नपर्ने भनेको गाडीको र प्लेनको टिकट नै पाइँदैन। पाए पनि महंगो हुन्छ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अविस्मरणीय दसैं कुन सालको लाग्छ र किन?
मेरो भुल्न नसक्ने दसैं भनेको पोहोर सालको हो। किनकि, म पूरै समय दसैंमा पोहोर अमेरिकामा थिएँ। साह्रै नेपाल र गाउँघरको याद आउँदो रहेछ त्यतिबेला।
बाल्यकालको दसैंलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ?
मीठो खाने, मामाघर जाने, नयाँ नाना लगाउने र मासु मात्रै खाएर अघाउने।
दसैंमा कत्तिको दक्षिणा प्रेमी हुनुहुन्थ्यो? अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी दक्षिणा थापेको साल याद छ? कसले दिनुभएको थियो?
सानोमा थिएँ नि। किन नहुनु। मलाई अझै याद छ सानो छँदा टीका लगाउँदा लगाउँदै खाम खोलिदिने चकचके थिएँ। तर अहिलेसम्म धेरै दक्षिणा पाएकोचाहिँ याद छैन। किनकि, छोरो मान्छेलाई फेसबुकमा लाइक अनि दक्षिणामा पैसा कम नै आउँछ हाम्रो नेपाल मा(हाँस्दै)।
दक्षिणाका लागि झगडा गरिन्थ्यो त?
झगडाचाहिँ गरिएन। तर चेलीहरूको धेरै देखेर रिस चाहिँ उठ्ने हुन्थ्यो।
चंगा उडाइन्थ्यो? अहिले उडाइन्छ?
म जुन गाउँ/ठाउँबाट आएको हो। त्यता चङ्गाको चलन थिएन। अहिले बरु अलि अलि आउन थाल्यो।
पिङ खेलिन्थ्यो? रमाइलो अनुभव छ भने सेयर गर्नुस् न?
मैले पिङचाहिँ खुब खेलेँ सानोमा। उठेर मच्चाउन चाहिँ आउँदैन थियो। मेरो मामाको छोराहरूले मच्चाउने अनि मचाहिँ बसेर रमाइलो लिने। सानोमा लिङ्गे पिङमा चडदा मेरो नयाँ दसैंको हाप पाइन्ट च्यात्तिएको छ। घरमा दामी धुलाइ खाइयो त्यसपछि।
तास खेलिन्छ? खेलिन्छ भने बढी हारिन्छ या जितिन्छ? सबैभन्दा बढी जितेको या हारेको क्षण?
तास खेल्न आउँदैन। आउने एउटा जुटपत्ती। हारेको जितेको केही छैन अनुभव।